Faah-faahin Qarax caawa Xildhibaan lagula eegtay Muqdisho – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Sep 18, 2019
Waxaa faah-faahino dheeraad ah laga helayaa nuuca iyo khasaaraha ka dhashay Qarax Miino oo caawa ka dhacay afaafka hore ee Hotel cusub oo yaalla Isgoyska Shaqaalaha ee wadada Maka Al-Mukarama.
Qaraxaas oo ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda, ayaa aad ugu dhawaa Hotel cusub oo ay ka socotay munaasabad xariga looga jarayay, sidoo kale waxaa aad u badnaa isticmaalka wadada xiliga uu qaraxu dhacayay.
Dadka wadada marayey xiligii uu qaraxu dhacay waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Garabow oo ka mid ah golaha shacabka, waxaana ku dhintay labo ka mid ah askartii ilaalada u eheed kuwo kalana ay ku dhaawacmeen, waxaana la sheegay in uu xildhibaanku ka badbaaday qaraxaas.
Labo qof oo kale oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen iyo dhaawaca shan ruux, waxaa goobta yaalay gaari NOAH ah oo uu watay qof shacab ah, kaas oo gabi ahaantiisba gubtay isaga iyo labo mooto Bajaaj.
In kastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah wadarta guud ee dhimashada ayaa noqoneysa inta Afar ruux oo labo askar ahaayeen iyo dhaawaca shan kale, waxaana goobta soo gaaray askar ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaas oo dadka rasaas ku kala cayrinaya.
Guddiga Doorashooyinka oo shihaado guddoonsiiyay Xisbiga uu hoggaaminayo siyaasi caan ah